Pakistana: Media, Fanehoankevitra Ary Tany Latsaka An-katerena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2018 6:12 GMT
Torolalana iray mba hahatakarana ny hoe latsaka an-katerena ao Pakistana no navoaka tamim-pitiavana nahazoana alalàna tamin'ny The Emergency Times, izay manolotra fomba fijery iray hafa mahaliana ho antsika :
Eny, ho fanombohana, mihantona (vakio hoe miato) avokoa ny lalàmpanorenana manontolo. Midika bebe kokoa ho lalàna miaramila izany, izay tsy voalaza akory ao anaty Lalàmpanorenana ary misy fanitsakitsahana goavana ny Andininy faha 6 amin'ny Lalàmpanorenana, izay mahatonga ny olona iray “manakorontana na manohitra na maniry ny hanongana ny Lalàmpanorenana amin-kery na fampiasan-kery na amin'ireo fomba hafa tsy araka ny lalàmpanorenana ho tompon'antoka amin'ny famadihana avo lenta”.
All things Pakistan miaiky fa, ny fanaovana an-tendrony sy ny herisetra dia lasa tsy voafehy nefa ny fiarahamonina voazarazara hatramin'ny fakany, voatohintohina ny fivavahana ary nampiasaina tsy miato hisarihana ho amin'ny herisetra, saingy tsy misy amin'ireo rehetra ireo manamarina ny fampiatoana ny Lalàmpanorenana sy ny fanambaràna ny maha-tany latsaka an-katerena ;
Porofo manavesatra ny tsy fahombiazan'ny governemanta izao rehetra izao.
Efa 52 ora izao i Pakistàna no niaina ny tany latsaka an-katerena izay nambara ny alin'ny Sabotsy, ary noho ny fampanginana ny media mihatra amin'izao fotoana, naneho hevitra ny GEO News tamin'ny alàlan'ny fandefasana rakipeo iray tao amin'ny fampitàny mbola azo raisina amin'ny aterineto. Na mbola mandeha aza ny tolotra telefaona finday sy ny fidirana aterineto, atahoran'ireo bilaogera sasany, toa an'i Alien,fa mety hivoa izany rahampitso:
Tapaka daholo ireo fantsona fampahalalam-baovao iraisam-pirenena rehetra sy ireo fantsona fampahalalam-baovao eo an-toerana. Ny PTV State News irery ihany no hany re ao amin'ny onjampeo. Hatramin'izao, mbola mahazo fidirana amin'ny aterineto sy amin'ireo finday izahay, saingy mety hiova izany rahampitso, satria tena mihazakazaka be tokoa ny fanehoankevitra momba ilay fepetran'ny tany latsaka an-katerena.
Momba ny resaka fanelingelenana ny fifandraisana amin'ny finday, tany am-piandohan'ilay fepetran'ny tany latsaka an-katerena, notaterin'ireo masoivohom-baovao sasantsasany fa voaelingelina ny fifandraisana tamin'ny finday ary mihatona avokoa ireo tolotra SMS, kanefa, araka ireo traikefanay momba ny fifandraisana anaty famonjena rehefa loza voajanahary, fantatray ankehitriny fa na eo aza ireo fifanindriana onjampeo amin'ny fandraisana telefona finday, mandeha ny hafatra an-tsoratra ary rah misy ny tranga hoe manomboka mametraka fanelingelenana ny telefaona finday ireo mpandraharaha pakistaney, tsy hahatratra an'ireo tolotra SMS izy io satria efa voaporofo ny tsy fahombiazany tamin'ny lasa noho ny fametrahana fitaovana ,mora vidy sy ny hoe voararan'ny PTA (Pakistan Telecommunications Authority) ny ankamaroan'ireny fitaovana ireny, vao haingana, tany am-piandohan'ity taona ity, avy tamina fandaminana ofisialy ny fifandraisandavitra ho an'ireo andrimpanjakana isankarazany izay nangatahana hanaisotra azy ireo tao anatin'ny fotoana fohy izay tapitra tamin'ny 30 janoary 2007.
Andalana ny fametrahana ny tolotra fampahalalam-baovao iray SMS 2 Blog (sy blog 2 SMS) mba hahafahan'ireo maniry te-hampandre ireo vaovao sy ireo zava-mitranga eny an-kianja amin'ny Help-Pakistan, izay avoaka tsy ho ela ny antsipirihany momba izany.
Tranga an'ireo Taliban mifampitàna amin'ny Pakistan io ao amin'ny Pakspectator izay anoratan'i Ghazala blaogy manao hoe “ i Pakistàna ihany no mikiky ny tenany ary Pakistàna ihany no manafika ny vahoakany“:
Nahoana isika no tsy miresaka amin'ireo olontsika ao Waziristan sy ao Swat ary any an-kafa? Nahoana izy ireo no zeràna baomba? Mahatsapa izany koa ireo olona ao Pakistàna, tahaka izay tsapan-dry zareo ao Waziristan sy ao Swat, ary tsara fiomanana izy ireo araka izany hanjera baomba amin'i Pakistàna manontolo.
Iray amin'ireo blaogera miahiahy momba ireo zava-miseho izay mety hitranga aorian'ny fanambaràna ny lalàna miaramila kelin'i Musharaff i Bilal, izay manipika fa manakaiky ny krizy politika i Pakistàna, raha toa fitotonganana goavan'i Pakistàna no hita tamin'ny fifampiraharahana tamin'ny Alatsinainy tao amin'ny Tsenam-bolan'i Karachi (avy amin'ny BBC News) vokatr'ilay fepetran'ny tany latsaka an-katerena miaraka amin'ireo mpahay toekarena matahotra ny fahavoazan'ireo fampiasam-bola maharitra ao amin'ilay firenena, amin'ny fanazavàna ny firodanana ara-bolan'io firenena io